Izibonelelo ezi-5 zokuThengisa nge-Agile kuneNkqubo yokuThengisa kweMveli » Martech Zone
Njengoko imibutho yophuhliso ikhula ngokobungakanani kunye nomda, baqala ukuba neengxaki ezingakumbi nangakumbi. Umbutho omkhulu unokwenza ukukhutshwa kwekota kunye namakhulu abaphuhlisi bebhala amawaka emigca yekhowudi esebenza kakuhle ekuhlaleni, kodwa ibangele iintloko kunye nokungqubana ezantsi komgangatho kuqinisekiso lomgangatho. Ezo zingqubano zingakhokelela ekubeni kususwe izinto, ukulibaziseka ekukhutshweni, kunye nokuhlangana phezulu nasezantsi kwikhonkco lomyalelo ukuzama nokususa imiqobo yendlela. Iindlela ze-Agile zinikezela ngendlela eyahlukileyo, zisebenzisana, zinika amandla amaqela ukuqhuba iziphumo zexesha elide ngothotho lwee iprrints.
Iindlela zokuthengisa zanamhlanje zifuna ukuba iinkampani zihambe ngendlela eyi uhambo lokuthengisa ngokukhawuleza Ukuqinisekisa ubuchule obusebenzayo, omni-channel amaqhinga anokufikelela kwiinjongo zombutho wonke. Ke iinkqubo ezifanayo ezincedileyo ukukhawulezisa kunye nokukhawulezisa uphuhliso lweshishini zisetyenzisiwe kumaqela entengiso. Kule infographic evela kumaqabane e-CMG, babhekisa kubo Ukuthengiswa kwe-Agile njengeNkqubo eNtsha yokuSebenza yokuThengisa.
Izibonelelo zentengiso ye-Agile
Ukwenza umsebenzi olungileyo - Abathengisi bagxila kokufunwa ngabathengi kunakwinkqubo yangaphakathi, yelifa kunye nenqanaba lokutsala eliqhubela phambili.
Ukuphumeza ngexesha elifanelekileyo - ngokunciphisa umjikelo kunye nokubeka phambili imikhankaso kunye neenzame, abathengisi banokuphendula ngokukhawuleza kwiimfuno zabathengi.
Ukufikelela kubantu abafanelekileyo - amaqela asebenzisanayo kunye nezicwangciso ezisebenzayo zijolise kubathengi abafanelekileyo ngomyalezo olungileyo ngexesha elifanelekileyo.
Ukufumana iziphumo ezinefuthe- Ukophula iisilos kunye neenkqubo zokuhlengahlengisa kuqinisekisa ukuba umyalezo unokulungiswa kwendlela yokuwela ukufikelela kunye neziphumo.
Ukulungiselela kunye nokuphucula -Imijikelezo ephindaphindayo iqinisekisa ukuba izifundo ezifundwe kwi-sprint yokugqibela zisetyenzisiwe kwi-elandelayo, ngokuqhubekayo ukuphucula intengiso ye-ROI.
Nalu ulwahlulo lwendlela amaqela amaninzi entengiso asebenza ngayo xa kuthelekiswa nendlela abathengisi be-agile abasebenza ngayo.
tags: ukuphendulabangelaukuthengisa okwakudalaInkqubo ye-agileUmsebenzi onqamlezileyokugxilwe kubathengiuvavanyoimigangathoiterativeukufunda ngokukhawulezaumngciphekoukuthengisa ngokwesikoimpompo